Itoobiya: Xamza Xaamid oo dhigta jaamacadda Gonder wuxuu allifay Koronta xarig la’aan ku shaqeyneysa | Hangool News
Itoobiya: Xamza Xaamid oo dhigta jaamacadda Gonder wuxuu allifay Koronta xarig la’aan ku shaqeyneysa
Xamze wuxuu ogaaday inuu awood u leeyahay inuu wax cusub uu allifo xilli uu yaraa oo uu dhiganayey fasallada seddexaad iyo afaraad inta badan hal abuurradiisu waxay la xiriireen korontada iyo qalabka korantada ku shaqeeya.
Xagga waxbarashada caadiga ahna waa wiil aad ugu firfircoon oo fasalka uu ku jira kaalmaha ugu horreeya ka gala, wuxuuna si gaar ah uu u jecel yahay maaddooyinka Xisaabta iyo Fiisiksi.
Fursaddaasi waxay Xamza u noqotay mid qaali ah wuxuuna kala kulmay dhiirragelin uusan filaneyn abaalmarin ayaan lagu guddoonsiiyey.
Xamza oo maamulaha dugsiga taagera ka helayo wuxuu haddana sameeyey sameecad dhageysiga idaacadaha loo adeegsan karo oo raadiyeyaasha lagu xiriirin karo.
In ka badan 20 hal abuur oo kala duwan ayuu Xamza marar kala duduwan soo bandhigay sida mashiin casri ah oo lagu daba galo ardayda habsaanta, mashiinta shaaha lagu kariyo, qalab beero iwm…
Wuxuu sida oo kale sameeyey teleefan aan khad iyo lacag toona u baahneen oo iskii u shaqeeynaya teleefankaasina wuxuu noqday mid ay macallimiinta dugsiga xilliyada ay shirayaan ay adeegsadaan oo wax kharash ahna uu kaga baxeyn.
Lahaanshaha sawirkaUNIVERSITY OF GONDER FB
Image captionAstaanta Jaamacadda Gonder uu Xamza dhigto
Xamza oo oo sanadka koobaad Jaamacadda Gonder ka dhigta maaddada Muhandisnimada Korantada iyo Koombiyuutarrada wuxuu inta badan akhriyaa buugaagta ay qoreen ama laga qoray Albert Einstein iyo Tomas Edison.
Inta badan hal abuurrada Xamza Xaamid waxay ku saleysan yihiin kuwa wax ka qaban kara dhibaatooyinka faraha badan ee ka jira dalka Itoobiya.
Marki ugu horreysay oo uu Xamza korontada sameeynayey, korantada halka ay mareyso haddii uu qof maro wuxuu dareemi jiray korontada garirkeeda balse dadaal dheer kaddib wuxuu ku guuleystay ineysan dadka wax dhib ah u geysanin korantada ay si caadi ah u shaqeyso.
Image captionJaamacadda Gonder
Jaamacadduna waxay Marwalba Xamza Xaamid la garab taagan tahay taageera buuxda, waxayna si buuxda ugu fasaxday inuu xilliga uu doono uu adeegsado qaybta sheybaadhka korontada ee jaamacadda, tababarrada iyo latalinta uu u baahdana ay marwalba jaamacadda siiso.